Iso ​နှင့် Bin format ​တွေ​အ​တွက် WinISO Standard 6.1.0.4499 ​ပါ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Iso ​နှင့် Bin format ​တွေ​အ​တွက် WinISO Standard 6.1.0.4499 ​ပါ
​ကဲ ​ဘာ​တွေ​ရ​လဲ​ဆို​တာ​က​တော့ power iso ​နဲ့​အ​တူ​တူ​ပါ​ပဲ. iso bootable disk ​လုပ်​မယ်. ​တစ်​ခြား format ​တွေ​ပြောင်း​မယ်. ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် ​ပြောင်း​ထား​ပြီး​သား iso ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​အ​ခွေ​ကူး(Burn)​မယ်​ပေါ့. ​အဲ့​ဒါ​တွေ ​လုပ်​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော် ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ ​တင်​ပေး​တဲ့​အ​ခါ​မှာ ​ဖိုင်​ဖြေ​လိုက်​ရင် .iso format ​နဲ့​ရ​လာ​တတ်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​အ​ခါ​မှာ power iso ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် win iso ​ဒါ​မှ​မ​ဟုတ် nero express ​တစ်​ခု​ခု​ရှိ​မှ ​အဲ့​ဒီ့ iso format ​ကို ​အ​ခွေ​ကူး​လို့​ရ​မှာ​ပါ. ​ကဲ​ဒီ​လောက်​ဆို​ရင် ​သ​ဘော​ပေါက်​လောက်​ပြီ​လို့​ထင်​ပါ​တယ်. window ​အ​ခွေ​တွေ​ကို​လဲ iso format ​နဲ့​တင်​ပေး​တာ​များ​ပါ​တယ်. ​ကဲ​လို​ချင်​ရင်​တော့ ​အောက်​မှာ dfownload ​လုပ်​လိုက်​ပါ။
​ကဲ​သူ့​ထဲ​က​အ​တိုင်း​ပဲ ​ရေး​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​နား​လည်​မယ်​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​ရေး​ထား​တာ ​လွယ်​ပါ​တယ်. ​ဘာ​လုပ်​လို့​ရ​တယ်​ဆို​တာ ​တန်း​သ​ဘော​ပေါက်​မှာ​ပါ. ​လို​ချင်​ရင် ​အောက်​မှာ download ​လုပ်​လိုက်​ပါ